Isifundi somnwe phantsi kwescreen sele sisebenza, kodwa ayisiyiyo i-iPhone eyikhuphelayo | IPhone iindaba
Isifundi somnwe phantsi kwescreen sele sisebenza, kodwa ayisiyiyo i-iPhone eyivulayo
Uyaphila, ebephethe ukubonisa kuqala ukuba umfundi weminwe phantsi kwesikrini iyasebenza kwaye ibonakala isebenza ngokupheleleyo. Kule meko yividiyo emfutshane apho ukusebenza kwalo mfundi kuboniswa ngezantsi kwesikrini kwaye kubonakala ngathi kusebenza ngokugqibeleleyo.
Ekuboneni kokuqala singathi ijongeka ngathi yiprototype yokuqala kunezixhobo ezilungele ukuya kwintengiso, kodwa okubonakalayo kukuba lo mfundi ufunda ngomnwe kwiscreen Kubonakala ngathi isebenza okokuqala. I-Apple enamahemuhemu e-iPhone 8 nangaphambi kwe-Samsung ene-Samsung Galaxy S7 kunye ne-S7 + yangoku kumzabalazo wokufezekisa oko sikubonayo kwividiyo esiyishiya emva kokutsiba.
IVivo ibonisa ukufundwa kweminwe phantsi kwesikrini
Kwividiyo ye URyan KoG iboniswa ngokukuko xa Cinezela kwiscreen kwindawo ebonisiweyo, isixhobo asitshixwanga. Inyani yile yokuba kubonakala ngathi yindawo elungileyo kubo ukuba babe nale teknoloji nokuba iyiprototype, kuya kuba yimfuneko ukubona imisebenzi emininzi emva kokuba i-terminal ivuliwe okanye kuvavanyo olunye lokuvula kodwa ngokubanzi inomdla .
Abanye abahlalutyi sele bebona Phila inkampani yokuqala ukuba nezixhobo kulo nyaka kunye nenzwa yeminwe phantsi kwesikrini kwaye le nkampani iceba ukubamba umsitho kwi IShanghai ngoJuni olandelayo. Ukuba kule nkomfa bazisa isixhobo esikwaziyo ukuvulwa ngokusebenzisa inzwa yeminwe ebekwe kwiscreen, baya kuba ngabokuqala ukuyiphumeza kwaye oku kungabonelela ngesiseko esifanelekileyo samarhe amaninzi malunga nokuba kungenzeka ukuba iinkampani ezinkulu ezinje ngeApple kunye nayo I-iPhone 8 entsha isebenzise le sensor yeminwe phantsi kwesikrini. Siza kuyilandela ngokusondeleyo inkcazo yeVivo ukubona ukuba zisifundisa ntoni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Isifundi somnwe phantsi kwescreen sele sisebenza, kodwa ayisiyiyo i-iPhone eyivulayo
ukuba bayayenza, iya kuba luxinzelelo ngakumbi kwiapile kunye nakwabanye abavelisi xD
Kwaye okuziintloni kakhulu .. kunye nezinto ezintsha ezingafunekiyo, iApple ayinakho ukwenza nantoni na phambi kwabanye .. bebelele oko ukusweleka kwemisebenzi
ULuis M. sitsho
Kuvakala ngathi yinkohliso…. Ngaphandle kwevidiyo eyandisiweyo… Inokuba sisikhusi nje ... Oko kuvulwe ngokunqakraza nakweliphi na indawo kwiscreen, asibobungqina bale vidiyo.
Phendula uLuis M
Yinyani leyo sitsho
Inkohliso iqinisekisile kwaye iye yavuza yonke ibhlog kunye nemithombo yeendaba
Phendula kwi-Menudo fake
Into yokudlala kaSphero yamva nje yiSpiderman esiza kuyilawula nge-iPhone yethu
Le yindlela amacala amatsha e-iPad kunye nokugubungela okwenziwe yiApple kujongeka ngathi